Showing २१-३० of ३,०७६ items.
शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन जारी
इनरुवा । बालबिकास केन्द्रका शिक्षिका र बिद्यालय कर्मचारीले मंगलबार समेत इनरुवा नगरपालिकामा धर्ना दिएका छन् । बढेको तलब नदिइएको भन्दै आन्दोलित शिक्षक कर्मचारीले माग सुनुवाई नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । आन्दोलित पक्षले धर्नालाई निरन्तरता दिएपनि पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार कार्यालय तालाबन्दी भने गर्न सकेनन् । कार्यालय समय लगत्तै नगरपालिका मूल गेटमा भेला भएका धर्नाकारीलाई नगर प्रहरीले बाटोमै रोकेको थियो । प्रहरीसमेत पुगेपछि शिक्षक, कर्मचारी केहिबेर सडकमै धर्ना बसेका थिए । नाराबाजी सहित धर्नामा बसेको आन्दोलित पक्षले माग सुनुवाईको सवालमा नगरपालिकाले वेवास्ता गरेको निष्कर्श निकालेको
मानेभञ्याङ आम्बोटेमा श्रीराम मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण भइरहेको छ । दुर्गम ठाउँका स्थानीयमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलमा यहाँ रु १४ करोड लागतमा शिक्षालय निर्माण गरिएको हो । भण्डारीको जन्मघर नजिकै ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको प्राविधिक शिक्षालयलाई राष्ट्रपतिले ३७ रोपनी र उहाँका काकाले १८ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिनुभएको हो । राष्ट्रपतिको पहलमा शिक्षालय निर्माण भएपछि स्थानीय उत्साहित छन् । राष्ट्रपतिका काका सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “राष्ट्रपतिको पहलमा शिक्षालय स्थापना भएपछि हामी उत्साहित भएका छौँ, यसले हाम्रो क्षेत्रको विकासमा टेव
विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरूमा भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकांश अभिभावकहरू भने सहमत छैनन् । उनीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने पक्षमा देखिएका छन् । दशैँ, तिहार चाड नजिक आइसकेका बेला र कोरोना भाइरसको जोखिम कायम रहेकै अवस्थामा १० दिनका लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय नियतवश भएको उनीहरूको बुझाइ छ । कुनै वैज्ञानिक अध्ययन विना निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको स्वार्थमा निर्णय गरेको भन्दै आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकले बताएका छन् । अभिभावकले जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव खर्च उठाउनका लागि विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा निर्णय गरेको आरोप पनि लगाए । स्वा
अरनिको कलेजमा विद्यार्थी बिदाइ
विराटनगर । विराटनगर–१० स्थित अरनिको उच्च माविले कक्षा १२ विज्ञान तथा व्यवस्थापन सङ्कायका ८ सय ९० जना विद्यार्थीहरूलाई बिदाइ गरेको छ । कलेजमा अध्ययनरत विज्ञान सङ्काय १७ औं ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई कलेजले एक कार्यक्रम आयोजना गरी बिदाइ गरेको हो ।कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य राजेश कार्की, को–अर्डिनेटर विकास खनाल, संस्थापकहरू डा. भविन्द्र निरौला, भरत दाहाल, निलमकुमार अधिकारी, शैलेश झा, लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी र उमेन्द्र विलाश लुइटेलको सहभागिता रहेको थियो ।
सूचना प्रविधि एक्काइसौं शताब्दीको सुनौलो उपहार हो । सूचनालाई शक्तिको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । अहिले Fast, smart, thin and competent खोजिरहेको जमना हो । यही सूचनाको सञ्चारमार्फत् भौतिक उपस्थिति विना नै कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अनलाइन कक्षा हो । शिक्षक विज्ञ तथा जानकार व्यक्तिले विद्यार्थीहरूलाई तथा प्रशिक्षार्थीहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट ज्ञान हस्तान्तरण गर्न तथा छलफल गर्न अनलाइनको प्रयोग गरिन्छ । अहिले कोभिडलगायतका महामारीको कारण उच्च अभिलाषा बोकेर सुन्दर भविष्यको खोजी गरिरहेका बालबालिकाहरू विविध प्रविधिको माध्यमबाट अनलाइनका भित्ताहरूमा चियाइरहेका छन् ।विश्वका विकसित देशहरूमा यसको प्रय
विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय अदूरदर्शी भएको प्रमाणित भएको छ । भदौ ३१ गते दशैं, तिहार पछि मात्रै भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय १० दिन नबित्दै परिवर्तन गरिएपश्चात् जनप्रतिनिधिको निर्णय अदूरदर्शी प्रमाणित भएको हो ।कोरोना भाइरस दोस्रो लहर सुरु भएपछि बन्द भएका शैक्षिक संस्था लगाउने या बन्द गर्ने निर्णय धेरै पटक भए । धरान उपमहानगर प्रमुख तिलक राईको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले नै निर्णय ग¥यो तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको पछिल्लो निर्णयले प्रमाणित भएको हो । यसले गर्दा कार्यपालिकाका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नगरले गरेका न
उपमहानगरले विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा निर्णय गर्योः अभिभावक
विजयपुर/धरान उपमहानगरले आइतबार(भोली) देखि भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा भएको अभिभावकले बताएका छन् । अभिभावक संघ नेपाल, धरानका सचिव विनोद तिमिल्सिनाले उपमहानगरले अपरिपक्क रुपमा नीजि तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुको स्वार्थमा निर्णय गरेको बताए । उनले उपमहानगरले विद्यालयको सबै भन्दा महत्व राख्ने सराकारवाला पक्ष अभिभावकसँग समन्वय समेत नगरी निर्णय गरेको बताए । विद्यालयलाई अभिभावकदेखि शुल्क अशुल्न मात्रै उपमहानगरका जन प्रतिनिधिले निर्णय गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘उपमहानगरले अभिभावकका समस्या हेरेन, विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा निर्णय ग¥यो ।’शुक्रबार अभ
धरान उपमहानगरपालिकामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालन गरेर आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर भौतिक रूपमा विद्यालय खुलाउने निर्णय भएको उपमहानगरपालिका १३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफ्लेले बताएका छन् । 'आज बसेको कार्यपालिकाको बैठकले विद्यालय खुलाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि ४ गतेबाट विद्यालय खुलाउने भन्ने हल्ला चलेको थियो । त्यति राम्रो छलफल हुन नसकेकाले भदौ ३१ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले तत्काल नखुलाउने भन्ने निर्णय भएको थियो । ' उनले भने 'धरान आसपासका पालिकाहरूले विद्यालय खुलाइसकेपछि
विराटनगर । विराटनगर – १३ स्थित ताजुल इस्लाम नमुना आधारभूत विद्यालय ( मदरसा) का व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अलीले किर्ते हस्ताक्षर गरेर शिक्षक नभएकालाई प्रधानध्यापकमा नियुक्ति गरेर लाखौं रूपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ । अलीले एक्लौटि तरिकाले विद्यालयको लेटरप्याट दुरूपयोग गरि किर्ते हस्ताक्षर संकलन गरेर शिक्षक नभएका मो. जाविदलाई प्रअमा नियुक्ति गरेर मदरका लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको हो ।अलीले २०७६ साल चैतमा मदरसामा मो. जाविदलाई नियुक्ति गरेको खुलेको छ । अध्यक्ष अलीले व्यवस्थापन समितिको अन्य सदस्यहरू, विराटनगर १३ का वडाअध्यक्ष झरीलाल महतोसमेतको किर्ते हस्ताक्षर गरेर मदरसाको प्रअ
धरान । धरानका निजी विद्यालय तथा कलेजहरुले धरान उपमहानगरपालिकाको निर्देशन उल्लंघन गर्दै भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको पाईएको छ ।उपमहानगरपालिकाले मङ्गलबार धरानका विभिन्न विद्यालय तथा कलेजहरुमा अनुगमन गर्दा निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएको हो । उपमहानगरको टोलिले धरानका विष्णु मेमोरियल, समिट सेकेन्डरी स्कुल, धरान आदर्श र युरेका स्कुलमा अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा विष्णु मेमोरियलमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन भईरहेको पाइएको थियो । विहानको सिफ्टमा कक्षा ११ र १२ को भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गरिएको विष्णु मेमोरियलले स्वीकार गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । विष्णु मेमो